बर्डफ्लु पीडित किसानलाई साढे चार करोड दिने निर्णय – healthykhabar.com
बर्डफ्लु पीडित किसानलाई साढे चार करोड दिने निर्णय
चितवन,६ असार । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको सक्रियतामा शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मकवानपुरका बर्डफ्लुका कारण पीडित किसानलाई राहतस्वरुप अनुदान रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पशुसेवा विभाग काठमाडौंबाट कृषकलाई यही असार ९ गते हेटौंडामा अनुदान रकम वितरण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार मकवानपुरका ५४ कृषकलाई राहतस्वरुप क्षतिपूर्तिबापत चार करोड ४२ लाख उपलब्ध गराइने भएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ६, ७, ८, १४, १५, १६ र १७ मा गरी ५४ कृषकका फर्ममा गत फागुनको पहिलो सातादेखि बर्डफ्लुको प्रकोप देखिएपछि प्रशासनले कुखुरा नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको थियो । सो अभियानअन्तर्गत प्रशासनले विभिन्न समयमा ६६ हजार ५४६ कुखुरा नष्ट गरेको थियो ।
किसानहरुको कुखुरा नष्ट गर्दा प्रत्येक कुखुराबापत नौ सय चार माग गरे पनि पशु सेवा विभागले भने ६७५ अर्थात् ७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएको छ । सो रकम प्रकृति जलाशय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण कार्यालय हेटौंडाबाट वितरण गरिने कार्यालय प्रमुख सानुकाजी पछाईले जानकारी दिए ।
औषधि व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. शेखको निधन
खोप किन्नका लागि सहयोग गर्न सरकारको आग्रह
नेपाल औषधी लिमिटेडले नेतृत्व पायो, महाप्रवन्धकमा मोहम्मद सफिउल्लाह नियुक्त
फाइजरको भ्याक्सिन लगाएकी स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु
क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको औषधि गुणस्तरहीन